Miyuu Pogba diyaar u yahay inuu ciyaaro kulanka soo aadan ee Manchester derby? – Tababare Solskjær ayaa ka jawaabaya – Gool FM
Miyuu Pogba diyaar u yahay inuu ciyaaro kulanka soo aadan ee Manchester derby? – Tababare Solskjær ayaa ka jawaabaya
Dajiye March 4, 2020
(Manchester) 04 Mar 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ka jawaabay warar saacadihii la soo dhaafay sheegayay in Paul Pogba uu ka qeyb galayo kulanka la wada sugayo toddobaadka soo aadan ee Manchester derby.
Paul Pogba ayaa dib u bilaabi doona tababarka buuxa isbuuca soo socda, kaddib markii uu ka soo kabsaday qaliin canqowga ah kaasoo ka horjoogsaday inuu kulamo badan ciyaaro tan iyo bilowgii sanadkan.
Laakiin Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa beeniyay inuu ku tiirsanaan doono kulanka soo aadan ee Manchester derby, isagoo carabka ku adkeeyay in soo laabashadiisu ay noqon doonto dhamaadka bishaan.
Ole Gunnar Solskjær ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Standard” ee dalka England wuxuu ku sheegay:
“Pogba wali wuxuu banaanka kula shaqeeyaa dhakhaatiirta jimicsiga, mana la tababaran doono kooxda koowaad ilaa usbuuca soo socda, aynu aragno inta ay qaadanayso”.
“Wuxuu u baahan yahay waqti si uu dib ugu helo taam ahaanshaha jir ahaaneed, Paul Pogba wuxuu soo wajahay xilli ciyaareed ay dhaawacyo ka buuxaan, laakiin waxaan ogahay inuu si weyn u doonayo inuu soo bogsado isla markaana uu dhaqsi ku soo laabto”.
Borussia Dortmund oo kaga yaabisay kooxda Manchester United qiimaha Jadon Sancho